FXG Godinaa Oromiyaa Hedduutti Itti Fufe. Shaggar Lixaa, Booranaa fi Godina Harargee Keessa itti FXG Jabaatee Itti Fufe. | QEERROO
FXG Godinaa Oromiyaa Hedduutti Itti Fufe. Shaggar Lixaa, Booranaa fi Godina Harargee Keessa itti FXG Jabaatee Itti Fufe.
Posted on July 21, 2016 by Qeerroo
Adoolessa 20,2016 FXG Oromiyaa godinaalee maratti marsaa 6ffaa baatii 8 oliif osoo wal irraa hin cinne itti fufee jira. Dhiyoo godina Harargee fi Arsii keessatti GFXG haala diina hundeen raasutti finiinaa turuun ni yaadatama. Godinoota kanneenitti uummanni jala muree Wayyaanee akka hin barbaanne gadi bahee himatee jira. Wayyaaneen aangoo ishee gadhiisuurra lubbuu hedduu barbaaddeesuu fi hidhuutti fuulleffattee jirti. Uummanni godinaalee kanneen keessa jiraatu hidhaa fi ajjechaalubbuu hedduun wareegamus ilaalee duubatti kan hin deebine Qeerroo waliin hiriiree FXG itti fufee jira.
Haaluma kanaan godina shawaa lixaatti torban tokko dura FXG marsaa 6ffaa baatii kana keessa jabaatee itti fufuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Amma godinni shawaa lixaa magaalonni kanneen Jalduu, Gindabarat, Gincii, Amboo, fi Goojoo tti uummanni ammaan booda sirni
Wayyaanee nu keessatti hin hojjetu jechuun murteeffateera.
Godina Shaggar keessa yeroo ammaa daandiin konkolaataan wayyaanee kan humna waraanaa deddeebistu nageenyaan keessa deemtu hin jiru daandiwwan hedduun cufaa akka tahan Qeerroon gabaasaa jira. itti dabalee uummanni karaawwan konkolaataa Wayyanee guutummaatti hin dabarsine xumuree ofirraa cufuutti huursee cufataa jira.
Lixi Shaggar yeroo ammaa Bilisa of baasee bulchiinsa diinaa onaa fi gandatti barbaadeessaa jira. Loltuu Wayyaanee meeshaa baattee naannofturraa kan hafe caasaan diina keessa uummata keessatti QBO dura dhaabbachuuf uummata Oromoo dabarsee diinaaf saaxilaa ture murannoo uummatichaa sodaadhaan bakka jijjiirrataa jiraatuunis Qeerroon gabaasee jira. Deggeraan mootummaa wayyaanee godina kana keessa jiraatu yeroo amma afaan qabatee uummata waliin hiriiree jiraatuun Qeerroon gabaasee jira.
Itti fufuun har’a Adoolessa 20 godina Booranaatti FXG uummataa fi barattoota yeroo gannaa boqonnaaf galaniin itti fufee jira. FXG Boorana ona Yaaballootti har’a gaggeeffamaa oole ganama irraa kaasee dhaadannoowwan
– ABBAAN BIYYAA OROMOODHA
– GAAFFIIN ABBAA BIYYUMMAA NUUF HAA DEEBIHU
– LAFTI KEENYA SAAMAME NUUF HAA DEEBIHU
– MOOTUMMAAN WAYYAANEE HATTUUDHA
– JIREENYA UUMMATA OROMOO DIIGUUF KAN DHAABBATE MOOTUMMAAN ISAA HAA DIIGAMU
– ABO’N NUU HAA BULCHU
Jechuun dhaadannoo dhageesisaa oolaniiru. Daandiwwanis Qeerroo Yaabelloon cufamuun kan gabaafame yoommuu tahu jiraattota naannichaa
yeroo duraa kanaaf FXG jabeessanii humna waraanaa dura dhaabbatanii falman kana doorsisuuf dhukaasni uummata irratti dhuka;e ture uummata
hafe dachaadhaan gara FXGtti hirmaachise.
Onuma kana keessatti milishootni gara gaaffii uummataa dhaabbatuu fi deggeruu irratti hiriiruu gabaasni Qeerroo addeessera. Milishootni fi
hojjetootni waajjira dhaabaa keessaa hojjetanis gaaffiin uummata siriiddha nuti uummata keenyaaf dhaabbanna malee kan uummata
shororkeessu hin deggerru jechuun murannoo qaban agarsiisaniiru. FXG itti fufiinsaaf halkan kanas Qeerroon waraqaa adda addaa bittimsee